BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 4/12/20150အကြံပြုခြင်း
တရုတ်နိုင်ငံ၊ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့အာဘော်ဖြစ်တဲ့ Global Times သတင်းစာရဲ့
သူမ မပါပဲ မဖြစ်နှိုင်ကြောင်း....
~ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးက
အထူးအရေးကြီးကြောင်း..... စစ်အုပ်ချုပ်ရေး တကျော့ပြန်လာဖို့က
~ နိုင်ငံရေးနဲ့. . စီးပွားရေးနယ်ပါယ်များက စစ်တပ်ရဲ့ပါဝင်မှုလျော့ချခြင်းက..
တိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့များကြား ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်နိုင်ကြောင်း.......
~ စစ်တပ်ပါဝင်မှုမရှိသည့် နိုင်ငံရေးဝန်းကျင်ကသာလျင်.....
~ ထိုကဲ့သို့ ဘုံအကျိုးစီးပွားတည်ဆောက်မှုအတွက်....
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ NLD မပါလို့မဖြစ်နိုင်ကြောင်း....
~ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့. အနာဂတ်မြင်ကွင်းမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကသာလျင်...
~ လက်ရှိအခြေအနေမှာ.... ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကသာလျင်
~ မြန်မာ့ အနာဂတ်မြင်ကွင်းမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကအရေးအကြီးဆုံး
~ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတွင် စစ်တပ်ကဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်
~ တရုတ်က မြန်မာနိုင်ငံကို ထောက်ပံ့သည့်မူဝါဒ ကျင့်သုံးနေသရွေ့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို အကျယ်တဝင့်နဲ့ အမွှန်းတင်ဂုဏ်ပြုပြီး
မြန်မာနိုင်ငံသမ္မတဦးသိန်းစိန်က၊ ၂.၃.၂၀၁၅ ရက်နေ့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကုိ နေပြည်တော်က သမ္မတအိမ်တော်မှာ
ကျနော့အနေနဲ့စဉ်းစားမိတာက စစ်အစိုးရရဲ့ သက်တမ်းတစ်လျောက်မှာ....
Power Game နောက်တစ်ပွဲအတွက်
(Zaw Win Hlaing)
Source.းThe Ladies News Journal.
မင်းသွေးသစ်ရဲ့ အဓိက ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ ခေါင်းကို ဓါတ်မှန်ရိုက်တာ အခြေအနေကောင်းတယ် … စိုးရိမ်စရာမရှိ … ဒါပေမယ့် ကျောကုန်းမှာ အရိုက်ခံထားရတာတွေက ညိုမဲနေတာတွေရှိပြီး နာနေသေးတယ်တဲ့ … ခေါင်းကို နံပါတ်တုတ်တွေနဲ့ အရိုက်ခံရချိန်မှာ လက်နဲ့ ကာမိတော့ … ညာဘက်လက်ခုံကို ကန့် လန့် ဖြတ်ရိုက်သလိုဖြစ်ပြီး လက်သူကြွယ်အရင်းနားလေးမှာ ချိုင့်နေတာတွေ့ရတယ် … ညာဘက်လက်မအရိုးနားလေးလည်း ပုံမှန်မဟုတ် ။
ရဲတွေက ဖိနပ်နဲ့ ဆောင့် ဆောင့်နင်းတဲ့ ဒဏ်ကြောင့် ဘယ်ဘက်ခြေထောက် ခြေမနားလေးလည်း ညာဘက်ခြေထောက်နဲ့မတူ အနည်းငယ်ဖောင်းနေတာတွေ့ရ … နာတော့ မနာတော့ပါလို့ ပြောပါတယ် ။
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာ ထောင်ကကျွေးတဲ့ ထမင်းက ကြမ်းလွန်းတာကြောင့် အစားပျက်ပြီး အစာအိမ်အောင့်သလိုဖြစ်ခဲ့တာ အခုတော့ သက်သာသွားပါပြီတဲ့ ။